စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်း ဘင်းမ်စတက် အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. M Shahidul Islam နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ တရုတ်ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက် ဘတ်ဂျက်ရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ | Ministry of Finance & Planning
Posted By : editor, Date : 09.11.20180comment
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းသည် ယနေ့ နေ့လယ်(၁၃:၀၀)နာရီတွင် ဘင်းမ်စတက် အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. M Shahidul Islam နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလည်းကောင်း၊ မွန်းလွဲ(၃)နာရီတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက် ဘတ်ဂျက်ရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Zhu Mingchun နှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လည်းကောင်း ရုံးအမှတ် (၂၆)တွင် သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဘင်းမ်စတက်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တရုတ်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဘတ်ဂျက်ရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း အမြင်ခြင်းဖလှယ်၍ ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဘင်းမ်စတက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ကွန်ဂရက် ဘတ်ဂျက်ရေးရာကော်မတီမှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နေပြည်တော် ၊ နိုဝင်ဘာ ၆